Biyaha Dareeraha Wareega | WatercolorPNG
Ink Vector Orange Peony Free Download Download ubax dhirta ubaxa. Caleemaha caleenta geedka ee geedka geedka gooni u goyn.
Ink Wajiga Orange Pungle. Ubaxa beeraha ubaxa ah. Caleemaha caleenta geedka ee geedka geedka gooni u goyn. Tilmaamaha sawirka sawirada. Sawir ...
Ink Vector Boone Peony Free Download Download ubaxa ubaxa ee ubaxa. Caleemaha caleenta geedka ee geedka geedka gooni u goyn.
Caleenta casriga ah ee casriga ah. Ubaxa beeraha ubaxa ah. Caleemaha caleenta geedka ee geedka geedka gooni u goyn. Tilmaamaha sawirka sawirada. Sawir ...
Ink Vector Peony Free Download Download ubaxa dhirta ubaxa. Caleemaha caleenta geedka ee geedka geedka gooni u goyn.
Qalabka loo yaqaan 'Ink Vector Peony'. Ubaxa beeraha ubaxa ah. Caleemaha caleenta geedka ee geedka geedka gooni u goyn. Tilmaamaha sawirka sawirada. Sawirka sawirka ...
Ink Vector Magnolia Free Download Download ubaxa ubax ee ubaxa. Caleemaha caleenta geedka ee geedka geedka gooni u goyn.
Ink Wanaagsan Magnolia, Gynopodium, Ubaxle Sweetbay. Ubaxa dhirta ubaxa ah. Caleemaha caleenta geedka ee geedka geedka gooni u goyn. Tilmaamaha sawirka sawirada. Sawir ...
Ink Vector Olive Free Download Download ubax dhirta ubaxa. Caleemaha caleenta geedka ee geedka geedka gooni u goyn.
Ink Weydiimaha miraha ah. Ubaxa dhirta ubaxa ah. Caleemaha caleenta geedka ee geedka geedka gooni u goyn. Tilmaamaha sawirka sawirada. Wareegga sawirrada vi ...
Ink Vector Poppy Free Download Download ubaxa dhirta ubaxa. Caleemaha caleenta geedka ee geedka geedka gooni u goyn.
Ink Vector Poppy ubaxa. Ubaxa dhirta ubaxa ah. Caleemaha caleenta geedka ee geedka geedka gooni u goyn. Tilmaamaha sawirka sawirada. Sawirka sawirka ...
Muuqaal aad u fiican oo loo yaqaan 'crystals'
Qalalaha casriga ah ee loo yaqaan 'Crystals vector' Geometric quartz quartz Quartz qaabka mooska dhagaxa mooska ...
Uruurinta Wareegyada Sunflower
Qalabka qoraxda Wareegyada Waddada 152. Maxaa gudaha ku jira: - png 10 faylasha, walxaha la yiraahdo, 300 dpi, iyadoon ...
Gold iyo Blue Watercolor iyo Vector ayaa dhigay SVG PNG EPS JPG
Gold iyo Blue Watercolor iyo SVG PNG EPS JPG Gold iyo Blue Watercolor iyo Vector ...
Waraaqaha Hibiscus Wareegyada Jaalaha ah iyo guduud
Waraaqaha Hibiscus Faylasha Jaalaha ah iyo midabada casriga ee 177 faylasha. Maxaa gudaha ku jira: - png 9 faylasha, walxaha go'doonka ah, ...
ANEMONE VECTOR SET clipart of faylasha 161. Maxaa gudaha ku jira: - png 10 faylasha, waxyaallaha go'doonka ah, 300 dpi, ...
Ku bilaw shaqo ku leh vektorka ubaxa biyaha
Tayada sawiradu waa isku mid! Sidaa darteed, waxaan leenahay laba nooc oo sawiro ah. Labadaba way ku haboon yihiin waxayna ku raaxaystaan ​​shaqada. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira farqi yar oo udhaxeeya aruurinta buundooyinka daaqa biyaha iyo sawirada kale ee raajada. Ka hor intaanaan bilaabin, maskaxda, in sawirada raajadu aanay ku habboonayn vector. Natiijadu waxay ku xiran tahay habka aad u isticmaashid. Hase yeeshe, waxaad awood u yeelan doontaa inaad ujeeddadaada ku daboosho nooc kasta oo garaaf ah oo lagu xalliyo qiyaasta sare. Sidaa daraadeed aan ku bilowno inaad naga heshay tan qaabkan sawirada qaabka ubaxa!
Si aan u bilowno, mid walbaha midabkeena diirran ee biyaha lagu cabbo waa mid laga soo qaado sawir qaadayaasha iyadoo la adeegsanaayo kiniin gaar ah. Waxay micnaheedu tahay in qalabka kombiyuutarka, oo aan haysan asal ahaan muuqaalkiisa dhabta ah ee adduunka dhabta ah, weli waa badeeco qora oo gaar ah. Badanaa, sawirada sawirada qaabka ubaxa waxay caawiyaan inay muujiyaan gacanta saynisyahanka farshaxanka xitaa ka fiican sawirrada warqadaha.
Farqiga ugu weyn ee u dhaxeeya vector iyo shaxanka raajada ayaa ah qaabka qaabka u matalaya. Tusaale kasta oo biyaha lagu dhajiyo vector waa sawir xisaabeed. Sidaa awgeed, sawirada noocan oo kale ah ayaa lagu cabbiri karaa iyadoon lumin tayada iyo in la ilaaliyo xajmiga yar ee faylasha. By habka, qaabka ubax vector qeebta ka kooban faylasha EPS ama SVG. Waxaa badanaa isticmaalaa dhamaan naqshadeeyayaasha. Gaaban, sawirka vector waa shabakad of pixels kuwaas oo wadajir u dhisaan image ah. Faa'iidooyinka ugu wanaagsan ee lagu muujiyo sawirrada caleemaha biyaha waa:
• Waxay yihiin dhaqaale ahaan. Sawirrada muuqaalku waxay badbaadiyaan booskaaga kombiyuutarka iyo wakhtiga gaarka ah ee shaqada.
• Guud ahaan waxay si dhakhso ah u muujiyaan shaashadaha oo daabacaan sidaa daraadeed waxay ka dhigaysaa mid ku fiican labada qaybood ee isticmaalka.
• Sawirrada muuqaalka ee ubaxa ayaa ah kuwo aad u sarreeya. Markaad haysato faylasha SVG ama EPS, waxaad si sahlan u bedeli kartaa qayb ka mid ah sawirada oo dib u habeyn ku samee wax kasta ama aad isku dartid.
Haddii aad na waydiisatid, maxay u fiican tahay naqshadeynta, waxaan ka jawaabeynaa in sawirada raajadu ay yihiin kuwa ugu fiican matalaadda midabada. Si kastaba ha noqotee, sawir qaadista sawir-gacmeedka ah ee biyaha lagu dhajiyo waa mid ka mid ah sawirrada midabaysan oo aan lumin doono quruxda hore ee rinjiyeynta dhabta ah. Xulo faa'idada nooc kasta oo ah shaashado aad u baahan tahay naqshadeyntaada oo isticmaal!